DEG DEG-Beesha caalamka oo Muqdisho ka qabanaysa arrin ka farxisay shacabka Soomaaliyeed-akhriso. | Puntland News
DEG DEG-Beesha caalamka oo Muqdisho ka qabanaysa arrin ka farxisay shacabka Soomaaliyeed-akhriso.
Magaaladda Muqdisho ayaa waxaa ka soconaya qorshe balaaran oo lagu dhisayo safaarado badan oo ay dagi doonaan dalalka xariirka dhow la leh Soomaaliya.
Wadamo badan ayaa isku diyaarinaya iney safaarado waa weyn ka sameystaan magaaladda Muqdisho halka sidoo kale ay magaalooyinka kale ay qunsuliyado ka dhisanayaan
Inkastoo safaaradaha ugu badan ee Muqdisho aysan dhisaneyn hadana waxaana qaarkood guryihii ama xarumihii ay daganaan jiriin degan dad danyar ah oo hooyo ka dhigtay sanadihii ugu dambeeyay.
One Response to DEG DEG-Beesha caalamka oo Muqdisho ka qabanaysa arrin ka farxisay shacabka Soomaaliyeed-akhriso.
BEESHA CAALAMKA GARANEY-E”IYADANA MAXAA U QORSHEYSAN BEESHA GUDAHA?